Peur de réussir, peur de critiquer...! Fika 2 handresena an'izany - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Itsika tsirairay avy io dia samy manana ny tahotrany: matahotra tsy ho tafa, mataotra tsy ahomby, matahotra miaina, matahotra miresaka en public, matahotra hovoakiana sns. Io olombelona rehetra hitan-tsika zay nanao zavatra milay io na manana succès gidraka be: « efa tafa mitsy lery » dia nanana tahotra dôl reo, fa nataony fitaovana ny tahotrany mba nampandroso azy. Ka inona ary no atao mba handresena anzay taotra izay?
Normal Natural ny peur
Ny olona tsy mbola nataotra tamin’ny fiainany kosa aloha dia lainga. Voajanahary io tahotra io ka niz niz tsy maints misy anzay, fa ny ol ze manana succès hitan-tsika etsy sy eroa io dia samy efa nataotra fa nahay nampiasa izay tahotrany izay hofitaovana enti-mandroso. Tsaroako tsara tamin’izaho niala orin’asa tamin’izany. Tamin’ny vao nametraka demission aloha dia mbola ça va nenty, tamin’ny namitàhana ny preavis mbola precipiter mihitsy fa hoe hanatanteraka ny rêve fa tapitra amin’izay ty preavis. Tsy an’asa intosny elah ry Angelot teo amin’izay vô ahoana ny ataoko rehefa tsisy kandra ah??? In no andohavako ofan-trano raha sendra miala tampoka ny kil-ko??? Be dia be ny zavatra nifamoivoy tao an-dohako tao de niditra moramora ingiah « Peur ». Fa noreseko izany peur izany de tonga nandresy ah. Ka inona ry ny fika nataoko?
Fika 1: Manankina ny fiainana amin’ilay mpahary: Andriamanitra Trinité Masina
Sahiko no milaza fa tsy izaho fa ny fahasoavan’Andriamanitra no miarak’amiko. Isaorako an’Andriamanitra trinité masina nanome ahy ny fanahy masina afaka nanoro-hevitr’ahy tamin’izay rehetra nataoko. Ka nankiniko tamin’ny taotra-ko rehetra ka izy no nanoro-hevitra tamin’ny zavatra rehetra efa nataoko sy ataoko ary mbola hoataoko. Ka anisan’izany izao fifampizarana aminareo ny expérience niainana izao. Ankinoa amin’ny tompo ny taotranao dia omeny vahaolana ianao. Ka tao anatin’izay no nahitako ny Reportage « La loi d’attraction » ka nananako ny « Pensé Positif ».
Fika 2: Mila manana toe-tsaina positif
Tamin’izay reportage La Loi d’attraction izay no nananako toe-tsaina positif ka nino an’io aho dia tanteraka tamiko ilay izy. Itsika mantsy lany fotoana mieiritreritra ny zavatra tsy tiana hotanteraka amin’ny fiainantsika. Raha nifamaly tamin’olona iray ohatra dia immaginer dôl zao zavatra tsisy rehetra izao sôd vonoin’iny ah raha hitany any an-dalana any, sôd zao, sôd zao hany ka ny alina matory lasa manonofy tampoka an’ilay olona, manonofy ratsy. Ny nataoko rehefa sendra fifamaliana amin’olona aho dia ny zavatra tsara aminy na aminay no eritreretiko dia rehefa mifanena dia matetika ilay olona no mifona na koa tonde miresaka be. De ça va otrzay foana. Zao no tadidio fa ze zavatra eritreretinao io na tsara na ratsy dia mivadika realité iny raha toa ka andanianao fotoana be no mandinika an’iny. Ka raha samy andany fotoana hieritreretana ihany tsy aleo mandany fotoana amin’izay zavatra tsara hiseho amin’ny fiainana!!
Famintinana: Lava loatra ny article dia tsy maintsy nozaraina 2. Fa ny tiako ambara amin’ny experience nianako dia ny hoe: Andriamanitra tsy mba manampy izay tsy manampy ny tenany.
Ary ny anareo mba nanao ahoana? Tantarao sy ambarao
Lety eh, ny tena efa tsy manam-bola indray ty mbola idiran’ny blem hafa! Ny antony mahatonga izay